Oge a n'èzí ngwá ụlọ Ime ụlọ Onye oche 2, N'èzí ngwá ụlọ si China na TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwaahịa Oche oche Ngwongwo doorlọ Mpụga Ọgbara ọhụrụ N’Igbe Gị
Ngwongwo doorlọ Mpụga Ọgbara ọhụrụ N’Igbe Gị
10 A tụkwasịrị US $ 175.00 / iberibe
PE rattan na Galvanized steel
Relax in style with our new folding single swing oche hanging wicker oche "Kachasị mma nchekwa Foldable Outdoor & Indoor Hanging Chair na ahịa!" Mee ka ụlọ gị dị n'èzí ma n'èzí gị na arịa ụlọ wicker anyị. Nwee obi iru ala na ndụ ime ụlọ Ikowe oche ma na-ekiri ụbọchị ahụ na-ese n'elu mmiri.
Aha oche Ngwongwo doorlọ Mpụga Ọgbara ọhụrụ N’Igbe Gị
item No TF-9766D
Ihe Patio Swing Materi Pee rattan, Power ntekwasa Steel, Waterproof ákwà, poli eriri
size foke nke rame 145 * 115 * 195cm, Oche nno 130 * 69 * 123cm
Ibu Ibu Max kwere 240.00KG
ngwugwu Mbukota katoonu, katọn abuo
Ikike nkwado 55pcs / 20GP, 144pcs / 40HQ
nnyefe Daysbọchị 10-15 mgbe ị natara nkwụnye ego maka otu 40 "HQ
1. nye iwu site na akpa zuru ezu: 55pcs / 20GP, 144pcs / 40HQ
2. Anyị na-anabatakwa usoro nke ịma atụ ma ọ bụrụ na inwere ike iburu ya n’ụlọ ọrụ anyị
Whera ga-eji ya
N'èzí (Ogige, Ogige, tlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Hotel, Villa, Beach, Resort, Nkeonwe obodo, Yard, Club, Ogwe, ọdọ mmiri, Bistro, Lawn, Balcony, ikuku mepere emepe, Oké Osimiri, Osimiri, Ogige, Okporo ụzọ, Anụ ụlọ, Mpaghara njem nlegharị , Terrace, Square, Ihe omume, Agbamakwụkwọ, Conlọ obibi, Azụmaahịa, ,lọ obibi, Ememe, Ngosipụta poratelọọrụ, oche, Yacht, mpaghara ntụrụndụ) na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ. Ime ụlọ (Cafe, ụlọ ebe a na-anọ amụ ihe, Meetinglọ Nzukọ, Salon, ime ụlọ, ebe a na-ehi ụra, Ngosipụta, Ngosipụta, mpaghara ntụrụndụ ụlọ, Alọ, ebe a na-edebe ọfịs). Anọ oge eji; ha na emegharia okpomoku iri-abuo na ala iri-isii n’onodu ihu igwe, ma ha bu mmiri ma dochapu ngwa ngwa, obuna etinye ya n’akuku ebe igwu mmiri, igaghi aru ha aru. Na-eguzogide mmiri ozuzo n'èzí, anwụ, snow, wdg.
zuru ezu Images
Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa nhọrọ, biko comee ka anyị nwee oge ị na-enweghị ihe ọ bụla.
Ngwugwu ngwugwu Basket 134 * 89 * 25 cm
base & osisi ngwugwu Size 132 * 45 * 30 cm
40HQ na-eburu ego 144 tent
Foshan Tanfly Furniture Co., Ltd ọkachamara na imepụta ihe eji arụ ụlọ n’èzí kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị na-elekwasị anya na arịa dị iche iche dị n'èzí, dị ka ukwe ukwe, oche dịpụrụ adịpụ wdg. Anyị ga-ekepụta arịa ụlọ maka ihe ị chọrọ n'ihi na ị bụ imụzọ anyị.
* Ihe ọ̀tụ̀tụ̀: afọ asaa, ihe karịrị ndị ọrụ 7 na ụlọ ọrụ 100 square mita, 7000 square ụlọ ebe a na-arụ ọrụ na ọfịs.
* Ogo: SGS kwadoro.
* Ike: karịa 300 * 40HQ condị na-azụta ngwá ụlọ n'otu afọ.
* Nzipu: Usoro zuru ezu OA zuru oke na-eme ka nnyefe jide n'aka ụbọchị 15-25.
* Mgbe ahịa gasịrị: mkpesa niile na-edozi n'ime ụbọchị 1-3.
* R&D: 4 onye R & D otu lekwasịrị anya n'èzí furnitures, ọ dịkarịa ala otu ọhụrụ catalouge kwa afọ wepụtara.
* Otu nzụpụta maka ngwá ụlọ dị na mpụga: TANFLY na-enye ihe ndozi ime ụlọ zuru oke.Ọ bụrụ na ịchọrọ ụlọ ọ bụla dị n'èzí anyị enweghị ike iwepụta, anyị nwere ike inye aka ịpụ maka ndị zụrụ anyị.
Obi dị anyị ụtọ ịnụ ajụjụ gị n’oge adịghị anya. Daalụ maka dropping site na weebụsaịtị anyị.
Q1: Kedu ụdị usoro ịkwụ ụgwọ na-anabata?
A: T / T (Ekwentị Nyefee)B: Western UnionC: PaypalD: MoneyGramQ2: Olee mgbe a ga-ebubata ngwongwo mgbe edobere ya?
Na-adabere ngwaahịa gị ahaziri iche, ọ nwere ike ịbụ ụbọchị iri ruo ụbọchị iri atọ,Ngwaahịa nkịtị, anyị nwere ike ibuga na odị ka anyị nwere ngwaahịa, ọtụtụ n'ime ihe anyị nwere ike ibuga na ụbọchị ọrụ ụbọchị 15-20! a ga-akọwapụta oge nnabata ahụ kpọmkwem na akwụkwọ ọnụahịa proforma once oda bu // conike / i / ied.Q3: Ogologo oge ole tupu ndị ahịa enweta ego?
Na mgbakwunye mmepụta oge mentiodị elu karịa, ọ na - ewe ụbọchị 10-25 kacha elu maka ibupu n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla gburugburu ụwa. ọ dabere na ọdụ ụgbọ mmiri gị anyị ga-ahọrọ ụzọ mbupu ọsọ ọsọ maka gị iji jide n'aka na ị ga-eburu ngwongwo n'oge!Q4: Egosiri ihe ndị dị na webụsaịtị njikere inyefe mgbe edobere ya?
Otutu n’ime ihe achoro ka emee once oda bu // conihe siri ike / i / ied.Stock nwere ike ịdị n'ihi oge dị iche iche, biko cozuo ndị ọrụ anyị maka ozi zuru ezu.Q5: Kedụ ka m ga-esi kwuo okwu ma kwuo ihe?
Naanị gwa ndị ọrụ anyị ihe nọmba (ma ọ bụ l.)ink) nke ihe ndị masịrị gị, anyị ga-akwadebekwara nkọwapụta maka gị. A ga-enye akwụkwọ ọnụahịa Proforma once oda bu coa ghaghi imeghari ma meputa yaice tupu ugwo na-dechara.
oche dị n'ime ime ụlọ
okenye igba oche oche
oche dịpụrụ adịpụ n'èzí
akwa oche oche
oche acrylic swing oche
oche ime ụlọ na-atụgharị
oche hammock oche